Ruushka Oo Wareray Ukraine - Wargane News
Home Somali News Ruushka Oo Wareray Ukraine
Ruushka Oo Wareray Ukraine
Duulaan dhuleed, weerar gantaalo iyo Putin oo dalbaday in askartooda ay hubka dhigaan
Ukraine ayaa sheegtay in Ruushku uu duullaan ballaaran ku qaaday dhulkooda, wax yar uun ka dib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku dhawaaqay subaxnimadii Khamiista in la qaaday hawlgal milatari oo gaar ah oo ka dhacay gobolka Donbass.
Wakaalada wararka ee Ukraine Interfax ayaa ku warantay weeraro gantaalo ah oo lagu qaaday xarumaha militariga ee ku yaala dalka Ukraine, in ciidamada Ruushka ay ka soo degeen magaalooyinka xeebta koonfureed ee Odessa iyo Mariupol, waxaana la daadgureeyay shaqaalihii iyo rakaabkii ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kiev ee Boryspiil. “Putin waxa uu hadda bilaabay duullaan ballaaran oo uu ku qaaday Ukraine, magaalooyinka nabadda ah ee Ukraine ayaa lagu soo weeraray,” Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka Khamiistii.”Kani waa dagaal gardaro ah, Ukraine way isdifaaci doontaa wayna guulaysan doontaa, dunidu way joojin kartaa Putin, wakhtiga ficilku waa hadda,” ayuu raaciyay.
Interfax ayaa sheegtay in ciidamada Ruushku ay soo degeen Mariupol iyo Odessa.
Mariupol waa magaalada ugu weyn Ukraine dhanka hore, waxaana ku nool nus milyan qof.
Shabakadda wararka ee “Ukrainska Pravda” oo soo xiganaysa mas’uul ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa maanta oo Khamiis ah sheegtay in xarumaha taliska ciidamada Ukraine ee magaalooyinka Kiev iyo Kharkiv lagu weeraray gantaallo.
Goobjoogayaal ku sugan magaalada Kiev ee Reuters ayaa maqlay qaraxyo is xig xigay, wax yar uun ka dib markii Ruushka uu ku dhawaaqay howlgal milateri oo ka dhacay dalka Ukraine.
Sharciga dagaalka iyo xiritaanka hawada
Madaxweynaha Ukraine ayaa ku dhawaaqay in la soo rogay sharciga dagaalka dhammaan dhulka dalkaas, waxaana dowladdiisa ay sidoo kale ku dhawaaqday in la xirayo hawada dalkaas ee duulista rayidka kaddib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku dhawaaqay howlgal milateri oo ka dhan ah dalkaas.
War qoraal ah oo ay soo dhigtay website-keeda, wasaaradda kaabayaasha dhaqaalaha ee Ukraine ayaa ku dhawaaqday xiritaanka hawada, iyadoo xustay in “ay jiraan khataro amni oo sarreeya.”
Isla markiiba, khamiistii, qiimaha foosto saliid ah ayaa ka gudbay heerka $ 100 markii ugu horeysay in ka badan 7 sano, ka dib markii Putin uu ku dhawaaqay inuu bilaabay “hawlgal militari” ee Ukraine, iyada oo walaac sii kordhaya oo ku saabsan dagaal ballaaran oo ka socda gudaha Ukraine. Yurubta bari.
Xoghayaha guud ee NATO ayaa sheegay in isbahaysigu ay garab taagan yihiin shacabka Ukraine xilligan adag ayna wax walba u qaban doonaan sidii ay u difaaci lahaayeen una difaaci lahaayeen dhammaan xulafada.
NATO waxay cambaaraysay “weerarka aan ka fiirsiga lahayn ee aan qiil lahayn” ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine.
Geesta kale, Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa ku dhawaaqday in ciidamadeedu aanay qaadin gantaallo iyo duqeymo cirka ah oo ay ku qaadeen magaalooyinka Ukraine, balse ay ku qaadeen goobo ciidan.
Goor sii horreysay, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay howlgal milateri oo laga sameynayo Ukraine, kaasoo lagu difaacayo gooni-goosadka taageersan Moscow ee ku sugan bariga dalkaas.
Putin wuxuu u sheegay askarta Yukreeniyaan: dhig hubkaaga
“Waxaan qaatay go’aanka ah in aan billaabo howlgal millatari,” ayuu Putin ku yiri khudbad aan la shaacin oo laga sii daayay taleefishinka ka hor 3:00 GMT, taasoo ku saleysan codsigii gooni-goosadka ee habeen hore ee gargaar iyo siyaasadda cadowtinimada ee NATO ee ku wajahan Ruushka, oo Ukraine ay tahay, sida uu qabo. , qalab.
Waxaana uu si toos ah ula hadlay militariga Ukraine, isagoo leh, “Waxaan idinku casuumayaa inaad hubka dhigtaan oo aad guryahiinnii ku noqotaan.
Waxa uu carabka ku adkeeyay inuusan dooneynin inuu “qabsado” Ukraine, laakiin uu “hub ka dhigis ku sameeyo.”
Waxa uu intaa ku daray in horumarka guud ee dhacdooyinka iyo falanqaynta xogta ay muujinayso in iska horimaadka u dhexeeya Ruushka iyo ciidamada qaranka ee Ukraine uu yahay mid lama huraan ah.
Dhankiisa, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa cambaareeyay “weerarka aan cudur daarka lahayn” ee Ruushku ku qaaday Ukraine, isagoo sheegay in uu sababi doono “khasaare naf iyo maalba leh.”
Biden ayaa intaa ku daray in “adduunku ay la xisaabtami doonaan Ruushka” weerarka uu ku qaaday Ukraine.
Xigasho: Al Jazeera + wakaaladaha